Shirkadda Lagu Bixiyo Lagu Bixiyo Lagu Bixiyo
Shirkadda Lagu Qulqulay Suulasha Buuxda
Buufaankani wuxuu ku dhajiyay bareeso labbis ah waxaa loogu talagalay qaab aan caadi aheyn oo soo jiidasho leh, taas oo kaa dhigi doonta nacasta indhaha oo dhan, mar kasta oo aad haysato. Waxaa lagu qallajiyaa qaab shiinees ah, kaas oo aad u raaxaysanaya inuu xidho. Shirkadani waa shey aan caadi aheyn oo dumarku ay u fiicnaan lahaayeen.
Waxay leedahay jilbaha qoorta ah iyo dharka dhererka dhererka leh, kaas oo siinaya shaatigga quruxdiisa gaarka ah xittaa adiga oo si fiican kuu daboolaya. Dhamaadka shaati ayaa loo qaabeeyay sida dharka, u oggolaanaya in shaati ay si quruxsan kuugu soo dhacdo markaad qaadato xarrago xarrago leh.
Waxay u fiican tahay cimilada xagaaga, sida muraayadda yaryar ay uur leedahay maqaarka.
Hal cabbir: dherer 69 cm, xawaare 210cm, garabka 51cm, sheyga 21cm
Sleeveless Patchwork Hippie Dress $ 36.00 $ 60.00
Suufiyada dhogorta leh ee santuuqa ah $ 72.00